के तपाई घरिघरि कोल्टे फेरेर सुत्नुहुन्छ ? यसरी सुत्नुको फाइदा जान्नुहोस्!::त्रिशुलीखवर
सीधा नसुत्दा राति सास फेर्न पनि गाह्रो हुन्छ र मेरुदण्डको हड्डी पनि बांगिन्छ । केही मानिस हात माथि पारेर सुत्छन् । यसो गर्दा हातमा दबाब पर्छ र दुख्न थाल्छ । राम्रो निद्राका लागि देब्रेतर्फ कोल्टे परेर सुतेको ठीक हुन्छ । तपाई राति घरिघरि कोल्टे फेरेर सुत्ने गर्नुहोस् । एजेन्सी ।